मो टोपन घटाउन के खाने, के नखाने ? - Khabar Nepali
होमपेज / स्वस्थ्य / मो टोपन घटाउन के खाने, के नखाने ?
प्रविधिले फड्को मारेको २१ औ शताब्दीमा खानपिनको व्यवहारले भने त्यही अनुपातमा फड्को मारेको देखिँदैन । समय यति व्यस्त भइदियो कि ! हामी आफ्नो स्वा’स्थ्यलाई ख्याल गर्न पनि भ्याइरहेका छैनौँ । जसका कारण दैनिक विभि’न्न सम स्याहरूबाट गुज्रिरहेका छौँ । त्यसमध्ये मो टोपन सबैभन्दा धेरै चि न्ता र चा सोको विषय बनेको छ ।
मो टोपन अर्थात भुँ डी लाग्ने सम स्याले अहिले धेरै मानिसलाई सता इरहेको देखिन्छ । पश्चिमी संस्कारमा रुम’ल्लिने हाम्रो बानीले पनि कता’कता यो समस्याले सताएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तै समस्याको कारण मु’टुका रो’ग, डाइ’बेटिज तथा विभिन्न अरु स्वा’स्थ्य स’मस्या आउन सक्छन् ।
हामीले खानपानमा कति ध्यान दियौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मो’टोपन घटाउन कस्ता खानेकुरा खाने भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनाँै ।
हावार्ड विश्वविद्यालयको एक अनुसन्धान अनुसार १२ वर्षका किशो’रीहरूले आफ्नो खाना’मा रेसा’दार खानेकुराहरू बढाएपछि उनीहरूको तौल २५ प्रतिशत घटेको पाइयो । त्यस्तै आफ्नो खानामा २ दिनसम्म दैनिक रूपमा फा’इबर (रेसा) बढाएमा १० प्रतिशत शरीरले लिने ऊर्जा घट्छ । ४ महिनाभित्रमा २ केजीसम्म तौल घट्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले पनि फा’इबरयुक्त वा रे’सा भएको खानेकुरा मो’टा मानिसहरुका लागि धेरै नै लाभदायी रहेको पाइएको छ ।
के हो रेसा’दार खानेकुरा ?
बोटबिरुवाका भागहरू जुन हाम्रो शरीरमा पच्दै’नन् र अव’शोषित हँुदैनन्, त्यस भागलाई रेसा भनिन्छ । रेसा भएको फललाई नै रेसा’दार खानेकुरा भनिन्छ । पशुपं’क्षीबाट आउने खानाहरू (जस्तै, मा’छा, मा’सु, दूध, दही, आदि) भन्दा बोटबिरुवाबाट पाइने फल (स्याउ, नासपाती, बदाम, जौ, सागपात) मा धेरै फाइबर (रेसा) पाइन्छ । त्यसैले जति धेरै बोटबिरुवाबाट पाइने फलहरू खाइयो, त्यति नै धेरै हाम्रो शरीरले फाइबर पाउँछ ।
हामीले कस्तो खालको फा’इबर खाइरहेका छौँ भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।
क) इन’सोलुबल फाइबर (पानीमा घुल्न नसक्ने ) ख) सो’लुबल फाइबर (पानीमा घुल्न सक्ने)
यी दुवै प्रकारका फा’इबर हाम्रो शरीरका लागि बराबर महत्वपूर्ण छन् । प्रायः मो’टोपन घटाउने कुरामा भने सोलुबल फाइबर नै उपयुक्त मानिन्छ । सोलुबल फाइबरले कसरी मो’टोपन घटाउन मद्दत गर्छ ।
क) सोलुबल फाइबरले भोक लगाउने हा’र्मोन जस्तै ग्रेली’नको मा’त्रा घटाउँछ भने अघाउने हर्मो’नहरू (जस्तै कोले’सि स्टो’काइनिन, जी एल’पी (१, पेप’टा इ’ड वा इ’वाइ) को उत्पादन बढाउँछ र यसरी लामो समयसम्म अघाउने र भोक नलाग्ने भएपछि हामी धेरै खाँदैनौँ अनि मो टोपन घटाउन मद्धत गर्छ ।
ख) सोलुबल फाइबरले क्यालो’रीको मात्रा बढ्न दिँदैन । फाइबर हाम्रो शरीरमा नपच्ने भएकाले यसबाट हामीले कुनै ऊर्जा पाउँदैनौ । त्यसैले धेरै फाइबरले खानाको मात्रा बढाए पनि क्या’लोरीको मात्रा भने बढ्न दिँदैन ।
ग) हाम्रो आ न्द्रा’मा रहेको सहयोगी र उपयोगी ब्या क्टेरि’याले सो लु’बल फाइब’रलाई थोर बहुत पचाउन सक्छ । यो टु’क्र्या उने र पचा उने प्रक्रियालाई फर मेन्टे’सन भनिन्छ । यो प्रक्रि यामा छोटो चेनको फ्या टी ए सिड बन्छ । जसले बो’सो टुक्र्या’उने गति बढाउँछ भने शरीरमा बो सो सञ्चय को मात्रा कम गर्छ । यसरी मो टोपन घटाउन सकिन्छ ।
घ) सोलुबल फाइबरले बो सो घटाउनुका साथै को ले’स्टेरोल (नराम्रो कोले स्टेरोल) घटाउन मद्दत गर्छ । तर फाइ बरयुक्त खाना खाइरहँदा पानी पनि त्य ित्तकै खानु जरुरी छ किनभने फाइबरले पानीसँग छिटो काम गर्न सक्छ ।
सोलुबल फाइबरका केही स्रोतहरू
अन्नः जौ, दाल, मटर, चना, सिमी, सागसब्जीः ब्रोकाउली, बन्दा, कुरिलो कन्दमूलः सखरखण्ड , फलफूलः स्याउ, नासपाती, सुन्तला, कागती, एभोकाडो
बीउः बदाम, फर्सीको बीउ, सूर्यमुखी बीउ, आलस,
सोलुबल फाइबरले मो टोपन घटाउँछ भन्दैमा, एकैचोटिमा धेरै खानु पनि राम्रो मानिँदैन । धेरै खाएमा पे’ट दु’ख्ने’, पे’ट’ फु’ल्ने, प’खा ला लाग्ने जस्ता स’मस्या देखा पर्छन् । त्यसैले यसलाई बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई ख्यालमा राख्दै उपभोग गर्दा राम्रो मानिन्छ । युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरका अनुसार पुरुषले दैनिक ३० देखि ३८ ग्राम र महिलाले दैनिक २१ देखि २५ ग्राम फाइबर उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् हामीले दैनिक ५ पटक खाना खान्छौँ भने एक पटकमा पुरुषले कम्तीमा ६ ग्राम फाइबर र महिलाले ५ ग्राम फाइ’बर खान जरुरी देखिन्छ ।
यसरी बढाउन सकिन्छ फाइबर
क) फलफूल र सागपात धेरै खाने र खाँदा धेरै नताछी खाने ख) बोक्रा बिनाको पोलिस दालभन्दा बोक्रासहितको पोलिस नगरिएको दाल खाने
ग) सेतो पोलिस गरिएको चामलभन्दा खैरो र पोलिस नगरिएको चामल प्रयोग गर्ने घ) रोटीका लागि मैदाभन्दा आँटा प्रयोग गर्ने ङ) फलफूलको जुसभन्दा ताजा फलफूल खाने च) खाजामा ज’ङ्क फुडभन्दा ताजा फलफूल र धेरै फा’इबर भएका अन्नहरू खाने ।